Maqaalada. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Ciladda argagaxa “Panic Disorder” ama “Panic Attack” waa nooc ka mid ah ciladda wallaaca iyo welwelka. Waxaa uu keenaa argagax, oo ah dareen cabsi oo aan sabab lahayn. Waxaa badanaa lagu qaldaa xanuunka wadnaha sida […]
MAXAA KU OGAYSIIYAY ALSHABAABKA IL MA ARAGTIDA AH-MAQAAL.
AFEEF:-Dhammaan Maqaalada Ku soo baxa Boggan waxa ay ka tarjumayaan oo kali ah aragtida gaar ahaaneed ee Qoraaga ku saxiixan,mana jiro haba yaraatee wax xidhiidh ah oo kala dhaxeeyn karo siyaasadda guud ee Shabakadda Warbaahinta […]